Anyị na-akụziri gị ka ịjikọ kọmputa na Dropbox na akpaghị aka | Akụkọ akụrụngwa
Nyaahụ, ngwa Dropbox maka gam akporo emelitere, na ụdị a ọ na-enye ohere nnukwu ọrụ chekwaa gị oge mgbe ị na-ejikọ kọmputa Dropbox site na usoro ole na ole dị mfe anyị ga-agwa gị ugbu a.
El quintessential ígwé ojii mba ọrụ O doro anya na ọ bụ site na Dropbox, ọbụlagodi Google belatala ọnụahịa ya maka atụmatụ kwa ọnwa, Dropbox ejirila dabara na ihe onye ọrụ nkịtị nwere ama ma ọ bụ mbadamba chọrọ.
Ọrụ ọhụrụ a na - enyere gị aka ijikọ kọmpụta gị na akaụntụ Dropbox na - enweghị mkpa ịbanye, na - echekwa gị nsogbu ọ pụtara. Site na iji igwefoto ị nwere ike i scanomi a QR code nke ahụ ga-arụ ọrụ a na akpaghị aka, na-amata gị ozugbo na nke ga-eduga na nbudata nke ngwa ahụ na desktọọpụ gị iji wụnye ya ma nwee Dropbox na kọmputa gị n'oge na-adịghị anya.
Etu esi ejikọ kọmputa na akpaghị aka na Dropbox
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịga na njikọ a www.dropbox / jikọọ site na kọmputa anyị chọrọ iji wụnye Dropbox na ya
Ugbu a, anyị ga-aga ekwentị anyị na ngwa Dropbox. Site na ntọala, ị ga - ahụ nhọrọ "Jikọta kọmputa"
Mgbe obere nkuzi ahụ pụtara, ị ga-eru nhọrọ 2 iji nyochaa QR koodu ga-apụta na mbụ site na njikọ www.dropbox / jikọọ
Tụọ aka na koodu QR ọ ga-amata gị ozugbo iji gwa gị ka ibudata faịlụ iji wụnye Dropbox na kọmputa gị na-enweghị mkpa ka ịbanye na ya.
A oké oge na-azọpụta usoro na-enye ohere ole na ole dị mfe nzọụkwụ ịnwere ịbanye na kọmputa gị ma ọ bụ nke ịchọrọ ijikọ iji jiri akaụntụ Dropbox gị. Cheta na ị ga-enwerịrị ụdị Dropbox kachasị ọhụrụ arụnyere na ekwentị ama ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi ejikọ kọmputa na Dropbox na akpaghị aka